२०७७ सालमा कहिले–कहिले पर्‍यो सार्वजनिक विदा ? – Ktm Dainik
२०७७ सालमा कहिले–कहिले पर्‍यो सार्वजनिक विदा ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सरकारले २०७७ सालका सार्वजनिक विदाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचीअनुसार २०७७ सालमा दशैंको टीका कात्तिक १० गते र भाइटीका मंसिर १ गते परेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, वैशाख ३ २०७७ १८:१०:४४